China Bellows Seal Gate Valve fekitari uye vagadziri | Nortech
Anopfuura makore makumi maviri eOEM uye ODM sevhisi yebasa.
Fonera Tsigiro 021-54717893
Tsigiro yeemail sales@nortech-v.com
Yakakwira Performance Butterfly Valve
Vakashinga Vagere Butterfly mavharuvhu
Zvinoyangarara Ball Valve
Trunnion akatasva Ball Valve
Kanda Iron Tarisa Valve
Kanda Simbi Tarisa Valve
Ndokugadzira Steel Check Valve
Kanda simbi magedhi mavharuvhu
ASME Globe mavharuvhu
DIN-EN Globe mavharuvhu
Ndokugadzira Steel Globe Valve
3 Nzira Bhora vharuvhu
Inverted Pressure Balance Lubricated Plug Mavharuvhu
Simudza plug yevhavha
Yakapfava Kuisa Sleeve Plug Valve
Ndokugadzira Simbi Flange
Rubha Kuwedzera Joint Imwe Sphere
Kaviri Flange Butterfly Valve
Kaviri Eccentric Butterfly Valve
Pamusoro Kupinda Bhora Valve
Kaviri Block Uye Bleed Bhora Valve
3 Piece Zvinoyangarara Ball Valve
Miseve Seal Gate Valve
Bellows chisimbiso gedhi vharafu, mune simbi yakakandwa, simbi isina chinhu uye simbi yesimbi, yehukuru hwekupisa hwemhepo.
2 ″ -24 ″, ichisimuka hunde, isiri kutenderera hunde
Kupera kubatanidza RF, BW, RTJ
Pressure chiyero Class150/300/600/900/10000
Dhizaini yakajairwa API600
Chiso nechiso ANSI B 16.10
NORTECH ndizvo imwe yekutungamira China Miseve Seal Gate Valve Mugadziri & Mutengesi.
Chii bhero mvuto chisimbiso vharuvhu?
Miseve Seal Gate Valve yakagadzirwa kusangana nezvinodiwa zvakanyanya zvekuomarara uye zvakanyanya kushanda mamiriro.
kunze kwekuunganidzwa kwakajairwa kurongedza semasevhisi ese egedhi, iyo mvuto chisimbiso gedhi vharafu zvakare ine yakaruma kurongedza mudziyo.
iyo yakatosiyana nzira yekurongedza chinhu chinodaidzwa kuti bhero bhero, kodhoni-senge simbi chubhu yakasungirirwa kune vharafu uye kune bhoneti, ichiumba chisvinu-chiratidzo chisimbiso chisina basa kukakavadzana uye bhero mvharanzi inokwanisa kutambanudza nekumanikidza ne Kufamba kuri kuita simbi isina kuvhiringidzwa, hapana nzvimbo kana pekudonha.
Chiteshi chebhoneti rakawedzerwa chinoshanda senzvimbo yekubatanidza maseru sensors, kuti aridze alamu uye / kana kutora matanho kana mabhero abvaruka. yakajairwa kurongedza gungano inochengetedza zvine mutsindo chisimbiso kudzamara kugadzirisa kwaitwa pavhavha.Mhungu ine hupenyu hushoma hwebasa, zvinoreva kuti mukana wekuputika ungangoitika. Ichi ndicho chikonzero gungano rakajairwa rekutakura rinogara richisanganisirwa mubhoneti yemagetsi.
Iwo mabhero akaumbwa-akaumbwa akachengetedzwa mukati mekobvu yesimbi chubhu.Mumwe mugumo mvuto ari welded kuti vharuvhu hunde, uye mumwe mugumo welded kuti unodzivirira chubhu. Iine yakafara flange yehubhu yakanyatso sungwa mubhoneti yevhavha, chisimbiso chisina kuvuza chiripo.
Mibhero ine hupenyu hwakaganhurirwa, zvinoreva kuti mukana wekuputika ungangoitika. Ichi ndicho chikonzero gungano rakajairwa rekutakura rinogara richisanganisirwa mubhoneti yemagetsio iyo mvuto chisimbiso ndiko kumwe kurongedza kurongedza kwemavhavha egedhi, yakakodzera kune mamwe mamiriro akakomba ekushanda.
Main maficha evhara mvhariso chisimbiso gedhi vharafu?
Kunyanya makemikari mashandiro emvura ari mumapombi anowanzo kuve chepfu, radioactive uye zvine njodzi. Bellows chisimbiso gedhi mavharuvhuanoshandiswa kudzivirira kuputika kwechero chemakemikari ane chepfu kumhepo. Zvinhu zvemuviri zvinogona kusarudzwa pazvinhu zvese zviripo, Iyo inodhonzwa inogona kupihwa muzvinhu zvakasiyana senge 316Ti, 321, C276 kana Alloy 625.
1) .Meturu mvuto inosimbisa iyo inofamba simbi uye inowedzera kugadzikana kweyakaunganidzwa masimbi esimbi mavharuvhu.
2) .Bellows yekutarisa doko (sarudzo): Ipulagi inogona kusunganidzwa nenzvimbo iri pamusoro pemabhero kuongorora maitiro.
3) .Zvisimbiso zviviri zvechipiri: a) Chigaro chekumashure munzvimbo yakashama; b) Graphite kurongedza.
4).YeBellows chisimbiso gedhi vharafu, ayo akakosha zvikamu simbi mvuto, iyo yepazasi magumo uye vharuvhu hunde zvinongoitika otomatiki kutenderera zvakasungwa, uye yekumusoro magumo uye yekudzivirira chubhu ndeye otomatiki mupumburu wakasungwa zvakare. Chipenga chesimbi chinoumbwa pakati pehunde panguva yekupinda kuburikidza nemuganho wekumanikidza uye nehurongwa hwemvura mukati mevhavha, kubvisa kuburitsa hunde;
5) .Magetsi-akavharika mavharuvhu anowanzo kuvuza achishandisa mass spectrometer kuti aone leakage rate pazasi pe11010-06 std.cc/sec.Double sealing design (mvuto chisimbiso uye hunde kurongedza) kana mvuto ikakundikana, vharafu stem kurongedza kunodzivirirawo leakage, uye mukuenderana neyepasi rose kuomesa zviyero;
6) .Mabhoneti akavharwa-mutsindo akatsigirwa neyakajairwa hunde kurongedza uye chiteshi chekuvhenekera chekudonha pakati pemhepo uye kurongedza kuitira kudzivirira kuburitsa zvine njodzi kwemvura ine njodzi kana pakaitika mhepo inoputika.
7) .Sezvo mutengesi wemafuta unogadzira chete tambo yedanda, Nyama yemafuta yakagadzirirwa pane bhoneti revhavha, tinogona kuzodza mafuta, nati uye bushing zvakananga, kuburikidza nezamu girizi.
8) .Ergonomically yakagadzirirwa handwheel, hupenyu hwakareba hwebasa, nyore kushanda, yakachengeteka uye yakavimbika;
Magadzirirwo evhara mvhariso chisimbiso gedhi vharafu?
Chigadzirwa zita Bellows chisimbiso gedhi vharafu
Chezita dhayamita 2 "-24"
Dzinde Rinokwira hunde, isiri inotenderera
Dhizaini dhizaini MSS SP117
Flange kupera ASME B16.5
Garo welded pamwe zvinodiwa ASME B16.25
Kufuridzira-tembiricha chiyero ASME B16.34
Pressure chiyero Kirasi150/300/600/900/10000
Dhizaini dhizaini API600
Chiso chakatarisana ANSI B 16.10
Kushanda tembiricha -196 ~ 600 ° C (zvinoenderana nezvinhu zvakasarudzwa)
Yekuongorora chiyero API598 / API6D / ISO5208
Chikumbiro chikuru Steam / Oiri / Gasi
Rudzi rwekushanda Handwheel /Chinyorwa gearbox
(1) Pakukumbira: yakatarisana neStelite - Monel - Hastelloy - zvimwe zvinhu
(2) Pakukumbira: yakatarisana neStelite - Monel - Hastelloy - zvimwe zvinhu
(3) Pakukumbira: 18 Kr - Monel - Hastelloy - zvimwe zvinhu
(4) Pakukumbira: Nodular Iron - Nitronic 60
(5) Pakukumbira: PTFE - zvimwe zvinhu
Mafomu eBellows chisimbiso gedhi mavharuvhu
Rudzi urwu rwe Miseve Seal Gate Valve inoshandiswa zvakanyanya mupayipi ine mvura & zvimwe zvinwiwa, kunyanya kune zvinwiwa zvine chepfu, zvine radioactive uye zvine njodzi
Peturu / mafuta
Kemikari / Petrochemical
Iyo indasitiri yemishonga
Simba uye Zvishandiso
Zvadaro: Ndokugadzira Steel Check Valve
API600 gedhi vharafu
API602 gedhi vharafu
Bellow chisimbiso gedhi vharafu
mvuto chisimbiso gedhi vharafu
EN1984 gedhi vharafu
High tembiricha gedhi vharafu
Bellow Chisimbiso Globe Valve
Tianjin Greatwall Kuyerera Valve Co., ltd. yepamusoro inotaridzika vharuvhu inogadzira muChina, yekugadzira nzvimbo yemavharufuru mavheji, cheki mavharuvhu uye strainers.
Kugadzirwa kweTriple eccentric butte ...
Butterfly vharafu bvunzo uye kumisikidza tro ...
Kuita nekushanda musimboti werwendo ...
Kuisirwa uye kugadzirisa kwepasi ...
Globe vharafu zvakanakira